War CUSUB oo laga helayo Sheekada Hazard, Chelsea iyo Real Madrid…(Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
War CUSUB oo laga helayo Sheekada Hazard, Chelsea iyo Real Madrid…(Maxaa soo kordhay?)
(Europe) 21 Okt 2018. Express ayaa war cusub ka soo saartay sheekada Hazard, Chelsea iyo Real Madrid.
Xiddiga reer Belgium ayaa si wayn lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqo kooxda reer Spain isagoona afkiisa ka qirtay inuu ku riyoodo inuu xirto maaliyada kooxda ka arrimisa Bernabeu.
Express ayaa iminka warineysa in Blues lagu wado inay Eden Hazard ka dhigto laacibka ugu mushaarka badan Premier League.
Chelsea ayaa inkabadan sanad sugeysay in Hazard uu u saxiixo heshiis cusub uu usbuuciiba ku qaadanayo 300,000 oo bound, laakiin iminka waxayba diyaar u yihiin inay siyaan mushaar intaas kabadan kaddib wacdariha uu ku bilowday kal ciyaareedka cusub.
Kooxda reer London ayaa dooneysa inay wada hadalo dib ula furto wiilka reer Belgium ka hor ciida gaalada iyagoona diyaar u ah inay miiska u soo saaraan heshiis uu ku qaadanayo usbuuciiba mushaar ka badan 350,000 oo bound waa haddii uu mustaqbalkiisa u hibeenayo kooxda afarta ama shanta sano ee soo socota.
Hazard oo qandaraaskiisu ka harsan yahay 18 bilood ayaa iminka mushaar ahaan u qaata 200,000 oo bound isagoona meelaha hoose ugu jira xiddigaha ugu mushaarka badan Premier League.
Laakiin heshiiska cusub ayaa ka dhigi doona mid ka mushaar badan Paul Pogba oo usbuuciiba qaata 290,000 iyo waliba Mesut Ozil 306,000 oo boun.
Wuxuu kaloo xitaa ka mushaar badnaan doonaa laacibka ugu mushaarka badan Premier League ee Sanchez kaa oo mushaarkiisa aas aasiga uu yahay 315,000 oo bound.
Hazard ayaa ku jira qaab ciyaareed aan innaba caadi ahayn, wuxuuna dhaliyay todobo gool sagaal kulan uu ciyaaray Premier Leauge ilaa iminka wuxuuna sameeyay Saddex Caawin ah.
Goolasha Hazard ayaa Chelsea ka caawiyay kaalinta labaad ee Premier League oo waxay 2-dhibcood u jiraan hogaamiyayaasha Manchester City.